Isiphathi samakhandlela Abakhiqizi & Abahlinzeki - China ikhandlela lokugcina ikhandlela
Izimbiza zamakhandlela ezingilazi ezishisayo ezinesivalo
Lesi siqukathi sekhandlela esingenalutho esinengilazi sinosayizi abathathu ukuze ukwazi ukwenza ikhandlela le-wax lengilazi elinamakha ahlukene.
Isitsha samakhandlela singenziwa ngemibala eminingi, ungakhetha umbala owuthandayo kusuka ekhadini lePantone, futhi singakunikeza insizakalo yesampula.
Into: A07M, A08M, A09M
Usayizi: D8.2CM * H9.8CM / D9.2CM * H11CM / D10.2CM * H13.1CM
ikhandlela le-Matte frosted custom Glass reed diffuser
Isithandani sombala onsomi matte frosted Glass ngokwezifiso Iphunga ikhandlela Jar / ikhandlela Isitsha ngamabhodlela
1. Le mbiza yamakhandlela yenziwa ngengilazi efriziwe nesembozo soqalo, ukuhlanganiswa kwendawo yokudlala kuhle kakhulu.
2. Imbiza yekhandlela ingenziwa ngosayizi ohlukile nombala, samukela izimpendulo zamakhasimende.
3. Singaphrinta futhi uphawu lwamakhasimende ebusweni benkomishi.
Usayizi: 6.2cm (Ububanzi) * 8.1cm (Ukuphakama) 8.2cm (Ububanzi) * 9.8cm (Height) 10.2cm (Ububanzi) * 13.1cm (Height)
Amathini amathini wensimbi ahlobisayo wokwenza amakhandlela
Ngezindilinga zomzimba nezensimbi eziyindilinga, lezi zimbiza zamakhandlela zilungele ukwenziwa kwamakhandlela. Ngaphezu kwalokho, mincane ngosayizi futhi inesisindo esincane, ngakho-ke iyaphatheka ngempela ukuthi ungathwala. Ungathela i-wax ye-soy kulamathanga, bese ubeka izintambo kumakhandlela e-DIY, okuthakazelisayo.
Usayizi: D7cm * H4.9cm
Izingilazi zamakhandlela ezingenalutho ze-matte glass
Le nkomishi yekhandlela le-matte ithandwa kakhulu kumakhasimende emhlabeni jikelele. Sinemibala eminingi yamakhasimende ongakhetha kuyo. Zonke iziqukathi zamakhandlela zifakwe isivalo sokhuni noma uqalo. Singahlinzeka nangezinsizakalo ezenziwe ngezifiso kumakhasimende ethu, njengokuphrinta uphawu lwenkampani enkomishini noma ukwenza izitika nokwenza ibhokisi lemibala.
Into: A02M, A03M, A07M
Usayizi: D6.2CM * H8.1CM, D7.2CM * H9.1CM, D8.2CM * H9.8CM
Umbala: singenza umbala owenziwe ngezifiso.
Akunalutho lwembiza yamakhandlela engilazi yamatte
Umbala wangokwezifiso oprintiwe-logo nosayizi
Nikeza ngenkonzo yesampula yokwenza kwamakhandlela e-DIY
Usayizi: D6CM * H7CM
Sinezinto ezicebile, ubuchwepheshe obuvuthiwe emakethe yamakhandlela iminyaka ecishe ibe ngu-20.
Sinikeza insizakalo yamakhasimende ye-ODM OEM.
silindele ukuthi ube yisikhonzi sakho sesikhathi eside eChina.
izimbiza ezinkulu ezicacile zekhandlela lengilazi elinesivalo soqalo
I-Reusable Versatile & Multipurpose - Sula izimbiza zengilazi ngosayizi we-prefect ozosetshenziswa njengezimbiza zezingilazi, isitsha semifino, iziqukathi zokunandisa, izimbiza zokugcina, iziqukathi zamakhandlela nezinye izipho ezenziwe ekhaya isiqukathi esingaphansi somoya. Kwenziwe kuthengwe izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokuqina nokusebenziseka kalula.
Usayizi: D10cm * H13cm
Isembozo: isivalo soqalo noma isivalo sokhuni
iqhwa le-matte elinamakhaza elingenalutho ophethe ikhandlela-i-champagne / Oluhlaza
ingilazi yesithwathwa esineqhwa elingenalutho
Nikeza insizakalo yesampula yokwenza amakhandlela
Into: A03M / A07M
Usayizi: D7.2CM * H9.1CMM: D8.2CM * H9.8CM
Usayizi we-Matte Frosted Glass Candle jar nge-lid
Impahla yengilazi ehlala isikhathi eside ene-matt black glaze enhle, isembozo sokhuni sokuqala sinephunga elincane elingathinti ukusetshenziswa. Uma iqhathaniswa nepulasitiki, ingilazi inempilo futhi iphephile futhi kulula ukuyihlanza. Isembozo sezinkuni nensimbi yokufaka uphawu lwe-silicone ivimbela umoya ukungena, kwakha indawo evaliwe futhi kugcine okuqukethwe kumile.
Umbala: Sula iqhwa
Ukusetshenziswa: Zikulungele ukwenza ikhandlela, ukugcina zonke izinhlobo zamabele, ikhukhi, ushukela, itiye, ama-alimondi, ikhofi, ufulawa, izinongo nokuningi, ukuhlangabezana nezidingo zakho zansuku zonke.
Lezi zimbiza zekhandlela lengilazi ezicwebezelisiwe ezinosayizi abathathu abahlukene. Ukuhlangabezana nezidingo zakho zamandla ahlukene. Idume kakhulu emazweni amaningi futhi ingasetshenziselwa ukwenza amakhandlela nokugcina okuthile. Sisebenzisa ikhava yoqalo e-eco-friendly ukwenza ngcono ukubekwa uphawu nokusebenziseka.
Into: A03P, A06P, A07P
Usayizi: D7.2CM * H9.1CM, D11.2CM * H8.7CM, D8.2CM * H9.8CM
Umbala: Mnyama, futhi wamukela umbala owenziwe ngezifiso
Izimbiza zekhandlela lengilazi ze-500ml ezipholile
Usayizi: D11.2cm * H8.7cm
iziqukathi zamakhandlela ezingilazi zamakhandlela amaningi
Into: A06P / A07P / A08P / A09P
Usayizi: D8CM * H8.1CM D9CM * H10CM D10.2CM * H12.5CM D11CM * H8CM
10oz sishaye upholishi ingilazi ikhandlela imbiza ngoqalo ikhava-Blue / Purple / White + Black
Kufuthwe okumnyama engilazini, yamukela ifaniswe namabhodlela ahlukene, njengesivalo sokhuni esivaliwe, isivalo sensimbi.
Samukela ilebula langasese nelogo ephrintiwe kasilika njengokufunwa kwakho. Usayizi nombala konke kungenziwa ngezifiso, kuphelele kakhulu ekwenzeni ikhandlela le-DIY.
Usayizi: D8.2cm * H9.8cm
Okokuqala nje, sine isitifiketi ngaphansi kwezinga le-Euro. Amakhandlela ethu afinyelele ezingeni le-European, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngekhwalithi yamakhandlela ethu. Imikhiqizo yethu ithunyelwa emazweni amaningi nasezifundeni, njenge-United States, iRussia, iYurophu, iSouth-mpumalanga, njll. Futhi zamukelwa kahle ngamakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe.
Ngokwesinye isandla, isibambi samakhandlela ethu engilazi sisetshenziswa ngezinto ezisezingeni eliphakeme zokusetshenziswa kanye ne-glassware eco-friendly, okuyinto engeyona ingilazi engaphansi futhi engeke idale ingozi kubantu. Kunezinhlobo eziningi zezimbiza zamakhandlela engilazi ozikhethelayo, njengezinsika zezingilazi zensika, izimbiza zamasoni, izimbiza zengilazi ze-squire, izimbiza zekhandlela lengilazi zepudding, izimbiza zesilazi zesitayela se-yankee, njll.
Ngaphezu kwalokho, izimbiza zekhandlela lengilazi zingenziwa ngemiphumela ehlukene, njenge-matte, ukufafaza okubandayo 、 okupholishiwe. Ungakhetha umphumela owuthandayo. Vele, uma ufuna ukuphrinta ilogo yakho noma amalebula enkomishini yengilazi, singakwenza futhi. Udinga nje ukusithumela imiklamo yakho, singakwenza ukukunikeza njengereferensi.
Ngaphezu kwalokho, ungakhetha izivalo ezahlukahlukene zezimpahla zakho. Sinesivalo soqalo, isivalo sokhuni, isivalo sensimbi, esihle embizeni yengilazi.
Okokugcina, mayelana nokupakisha, sisebenzisa isikhwama sebholamu somoya wezinsika zomoya ukugoqa izimbiza zamakhandlela engilazi ukugwema ukulimala ngesikhathi sokuhamba. Imikhiqizo sizoyivikela kakhulu, ukuze imikhiqizo ithunyelwe ngokuphepha kumakhasimende.
Nayi imibono evumayo evela kumakhasimende ethu: